Kurasa marara, zvinounza matambudziko api kumhepo, ivhu nemvura? | Green Renewables
Nuria | | Imba yeGreen, Environment
Maitiro ekugadzirisa marara anoramba ari nyaya yakamirira mumaguta mazhinji kutenderera pasirese, kunyanya mune inonyanya kuwanda nekuda kweiyo hombe vhoriyamu yemarara inogadzirwa nevagari vayo.
Chaizvoizvo nekuda kwekushaikwa kwekushandisika kwemarara, kurasa tsvina kwakasimba rave dambudziko zvakakomba kwazvo munzvimbo zhinji dzepasi.
1 Mhando dzetsvina
2 Kurasa marara kwakasimba kunosvibisa mweya, ivhu nemvura
3 Kusvibiswa kwemweya kubva pakuraswa kwemarara
Marara anosanganisira matatu makuru mapoka:
Organic: marara ehupenyu senge michero nemichero yemiriwo, zvidimbu zvekudya, bepa remushu (sirika, makushe nedonje) Izvi ndizvo tsvina yakashata.
Inorganic: zvicherwa uye zvigadzirwa zvekugadzira (simbi, girazi, makadhibhokisi epurasitiki). Magetsi emagetsi. Izvo hazvigone kuora.
Utsanana: marara ezvishandiswa zvekurapa zvinoshandiswa (gauze, mabhandeji, donje), bepa remuchimbuzi, napkin yehutsanana, zvinyama uye manapukeni anoraswa.
La tsvina tsvina ndiyo inoshungurudza vezvemamiriro ekunze zvakanyanya nekuti ndizvo vanonyatsofunga marara.
Organic marara inogona kushandiswazve uye kugadzira manyowa emichero michero nemiti uye inorganic tsvina ingangoita zana muzana inogona kugadziriswazve.
Nemaonero eruzhinji eruzhinji uye kuziva kwevagari kuti vanzwisise kukosha kwekuisa marara, chikamu chedambudziko rezvakatipoteredza chaizogadziriswa
Inorganic marara inogona kudzokororwa kana kushandiswazve, uye ma organic, ave mafetiraiza, manyowa anogadzirwa mumba kana chikafu chemamwe mhuka.
Kurasa marara kwakasimba kunosvibisa mweya, ivhu nemvura
Asi dambudziko rakakomba ndere kubata tsvina uye kusanganisa mhando dzese dzetsvina izvo zvinoenda kunzvimbo dzinorasirwa marara kana marara uye izvo zvichaitika kudzamara kudzokororwa kweperesenti yepamusoro kwazvo yemarara yakasimba yawanikwa.
Zvichakadaro kugarisana kwemarudzi mazhinji emarara mukati matura anoramba achizadza mweya, ivhu uye kusvibiswa kwemvura kudzikisira hunhu hwezvakatipoteredza zvakawandisa, uye kunyanya mumaguta ari pedyo nenzvimbo dzekurasa, izvo zvinowanzo kuve hukuru hwevanhu.
Kusvibiswa kwemweya kubva pakuraswa kwemarara
El mweya wakasvibiswa nemweya kuuya kubva mukuora kwemarara, kwechikamu chayo, iyo uriri Iyo inobatwawo kana tsvina ikasangana nayo uye iyo mvura Rinoshandurwa kana marara akaraswa akananga mumakungwa nenzizi kana kana mvura ikashambidza zvinhu zvine chepfu zvinogadzira maitiro emakemikari anoitika kana tsvina yasangana nemhepo kana nezvimwe zvinhu.
Panogadzirwa marara kuora magasi anodziya sezvavari: Methane (CH4), Nitrous oxide (N20), Carbon dioxide (CO2). Iyo yekupedzisira ndiyo inonyanya kukuvadza nekuda kwehupfu hwayo uye nekuti inoramba iri mumhepo kwenguva ingangoita mazana mashanu emakore.
Aya magasi ndiwo anokonzeresa iyo kuchinja kwemamiriro ekunze sezvavanobata kupisa kunogadzirwa nemwaranzi yezuva uye kuwedzera iyo kupisa kwepasi pose (kuwedzera kwekushisa kwePasi). Masayendisiti anofungidzira izvozvo tembiricha yepasi anogona kuwedzera pakati pe1,5 kusvika 5,5º kana greenhouse gasi inoburitsa mudenga isina kudzorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Kurasa marara
agustina cabrera akadaro
Ko mbichana ndaidawo kubva kumvura
Pindura agustina cabrera
Franklin naJimi Vaparidzi XNUMXth B akadaro
Vadzidzi vegiredhi B rechitanhatu veIE ACGR vakakurudzirwa uye vanovimbisa kusarudza marara kuitira kuti vasaramba vachisvibisa imba yedu iri pasi pano.
Pindura kuna Franklin naJimi Vaparidzi XNUMXth B
uye tinokumbira munhu wese kuti afungisise nezvazvo nekuti idambudziko rakakomba rave kutotikanganisa
Forestalia inotsvaira iyo inotangiswazve okisheni